Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Brendan Rodgers Akụkọ nwata na gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ ndụ ha
Ihe omuma anyi nke Brendan Rodgers na-egosiputa ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke Northern Ireland ọkachamara football football. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na Leicester City. Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Brendan Rodgers 'Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Brendan Rodgers.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị njikwa isi ya dị jụụ- na-eme ndị egwuregwu ya debe bọọlụ ma ghee egwuregwu na-agafe ebe bọọlụ na-agagharị mgbe niile. Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ tụlere Brendan Rodgers Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere ụmụaka Brendan Rodgers:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha "Buck Rodgers". A mụrụ Brendan Rodgers na 26th nke Jenụwarị 1973 na nne ya, Christina Rodgers na nna, Malachy Rodgers na Carnlough, obodo dị n'akụkụ mmiri na Northern Ireland nke eserese n'okpuru Google Map.
Brendan Rodgers kelere n’obodo nsogbu dị na Carnlough.
Onye nchịkwa Bekee na-enwe ọganihu na ezinụlọ Northern Irish tolitere dị ka ọkpara nke ụmụ nwoke ise amụrụ nye ndị mụrụ ya - Christina (mum) na Malachy (papa). Brendan Rodgers si n'ezinụlọ nna ya nke nna ya bụ onye na-ese ihe na onye ndozi. Mgbe nna ya na-arụsi ọrụ ike na eserese ya na ọrụ ịchọ mma, nne Brendan, Christiana lekọtara obere Brendan na ụmụnne ya. Mgbe ụfọdụ ọ na - etinye aka dị ka onye ọrụ afọ ofufo maka nzukọ ọrụ ebere Irish.
Brendan tolitere na-enwe nsogbu na Carnlough: Dịka nwatakịrị nwoke nke dị afọ 7, Brendan so n'ime ụmụaka ndị ọzọ a na-akụkarị (nọ n'ime ụlọ) n'ihi oke mpụ n'obodo ya nsogbu. N'ikwu okwu banyere mpụ, na 4th nke June 1980, otu onye otu Irish Independence Party na onye otu kansụl Larne Bo John John Turnley gburu site na mkpọsa ndị agha n'obodo. Nke a sochiri ọnwụ onye omebe iwu nke kwesịrị ntụkwasị obi, Andrew Mason, ndị mmadụ abụọ n'obodo ahụ tiri ya ihe ọzọ.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'ime obodo ụra nke Northern Irish dị na Carnlough, ịtọgbọrọ chakoo bụ maka ọtụtụ ụmụntakịrị, gụnyere Brendan mgbe enwere bọl n'ụkwụ ha. Banyere egwuregwu bọọlụ, a na-anọchite anya ezinụlọ Brendan Rodgers nke ọma, na fanbase nke Sheffield anwụ Wenezde na Celt.
Rodgers gbara bọọlụ n'oge egwuregwu mgbe ọ gara All Saints Catholic Primary School na Ballymena, obodo dị na Northern Ireland- 26 nkeji si n'ụlọ ezinụlọ ya. Egwuregwu abughi naanị ihe na-agba n'ime ezinụlọ. N'oge ahụ, nne na nna Brendan Rodgers chọrọ ka ụmụ ha nwoke abụghị naanị ka ha gụọ akwụkwọ, kama ka ha na-ahọrọ ọrụ aka.
Mgbe Brendan họọrọ bọl, otu n'ime ụmụnne ya nwoke malitere ịgba egwu, mkpebi nke mere ezinụlọ ya niile dị mpako na oge. Ị maara?… Ezinụlọ Brendan Rodgers enweghị ihe ịga nke ọma mbụ nke nwa nwanne ya nwoke bụ Malachy Jnr bụ onye ghọrọ mba a ma ama na onye ọbụ abụ nke ọdịda anyanwụ.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Mmalite Ndụ
Ọ bụ ezie na obere bro ya kachasị mma na ọrụ egwu ya, Brendan Rodgers weere ụzọ nke ya n'ọchịchọ ọ na-amalite ịmalite ọrụ ịgba bọl. Mgbe nnwale mechara nke ọma na 1984 afọ, obere Rodgers (eserese n'okpuru) malitere ọrụ ntorobịa ya dịka onye na-agbachitere ya na Ballymena United, ndị otu mpaghara ya.
Brendan Rodgers n'oge ọ bụ nwata na Ballymena.
N'oge ọ na-egwu egwu, Brendan Rodgers kpọchiri onye Northern Ireland Irishman Anton Rogan onye buru 7 afọ ya. Ọ nwere nnukwu mmetụta na ọrụ ntorobịa ya, njirimara nke mere ka ọ nweta otuto mba niile ọbụna tupu ya agụchaa akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Ị maara?… Mgbe ọ ka bụ onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ, a kpọrọ Brendan Rodgers ka ọ nọchite anya Northern Ireland na ọkwa ụlọ akwụkwọ. Matdị ntozu oke dị otú a n’oge ọ dị obere hụrụ ka klọb ya na 1987 na-eme ya ka ọ banye n’egwuregwu bọọlụ.
Oge mmalite nke Brendan Rodgers na ndi otu ya.
Rodgers nọgidere na-enwe ọganihu na obodo ya mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. Na 1988, ọ gara n'ihu na-anọchi anya Northern Ireland mgbe ọ kwagara St Patrick's College na-egwu megide mba bọọlụ kacha mma n'ụwa - Brazil.
Brendan Rodgers gbara bọọlụ etu ọ chọrọ ka ndị otu ya gwuo bọọlụ n’oge a na-anụtụbeghị Northern Irish. N'oge ahụ, onye bụbu onye nkụzi ya nwere ike icheta otú o si jupụta n'ike n'ike ma were ya dị ka ọdịnihu nke otu ndị isi mba. N'agbanyeghị mkparị niile ndị a, Brendan Rodgers amachaghị banyere ya DARK TIMES na-abịa n'ụzọ ya.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Difzọ Isi Ike si Akụkọ Mere Eme
Mgbe ọ gbanwechara ọkachamara na Ballymena United, Brendan Rodgers mgbe ọ dị afọ 18 bịanyere aka maka Readinggụ. Ị maara?… Ejiri oge ya ọrụ egwuregwu gbata gbata na njedebe tupu ya amalite n'ihi ọnọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa a makwaara Familial osteochondritis dissecans.
Brendan Rodgers tara ahụhụ site na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ nke na-egbochi ọrụ ịgba bọọlụ ya.
Obi abụọ adịghị ya, onye ọ bụla na-agba ụkwụ nke na-arịa ụdị mmerụ ahụ, nke na-eduga n'ịkwụsị ọrụ ọ bụla, ga-ama nke ọma ụdị obi mgbu ọ nwere ike ibute. O were Brendan Rodgers ọtụtụ afọ iji merie ma obi erughị ala na ọnọdụ uche nke ihe ahụ merenụ kpatara.
Followinggbaso ụgwọ ezumike nka ya, Rodgers kwụrụ ụgwọ site na whogụ nyere ya ọrụ Onye ntorobịa. Iji nweta ahụmịhe nchịkwa ọzọ, Rodgers gara n'ihu na-azụ ndị ntorobịa ya na bọọlụ na-enweghị klọb na Newport (IOW), Witney Town na Newbury. Ọzọkwa, iji kwụọ obere ụgwọ ọnwa ya dị ka onye nchịkwa ntorobịa, Brendan Rodgers malitere ịrụ ọrụ John Lewis na-echekwa iji kwado ezinụlọ ya na-eto eto.
Brendan Rodgers rụrụ ọrụ na John Lewis Store iji nye ezinụlọ ya nri.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Na-ewu ewu Akụkọ
Otu o siri nweta enyemaka site na Jose Mourinho: Mgbe o nwesịrị ọtụtụ ego iji multitasking dị ka onye nchịkwa ntorobịa yana onye njikwa ụlọ ahịa, Brendan Rodgers na ngwụsị 1990 kpebiri mkpebi ịga Spain iji nweta agụmakwụkwọ nchịkwa dị elu. Mgbe agụmakwụkwọ ya ka jisiri ike n'ọrụ ya na Ọgụgụ, ọ malitere itinye akwụkwọ maka ọtụtụ klọb kachasị elu, otu n'ime ha bụ ihe na-ewugharị Chelsea FC Jose Mourinho.
Brendan Rodgers ụbọchị dị ka Onye Ntorobịa Ntorobịa nke Chelsea.
Ị maara? Jose Mourinho enwere mmasị na CV Brendan Rodger ya, na ọ kpọrọ ya maka ọrụ ntorobịa Chelsea na-agba ajụjụ ọnụ nke ọ gafere. Rodgers hapụrụ ọrụ ya dị ka onye ntụzi agụmakwụkwọ na Reading maka ịkwaga na nnukwu egwuregwu bọọlụ, bụrụ onye isi ntorobịa ntorobịa nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea n'afọ 2004.
Jose Mourinho kwalitere Rodgers ka ọ bụrụ onye nchịkwa otu na afọ abụọ Chelsea chepụtara. Nkwalite a bịara n'ihi na Brendan kwụsiri ike n'akụkụ onye isi ya (foto dị n'okpuru) nke nyere ya ohere itolite.
Jose Mourinho kwalitere Brendan Rodgers n'ihi iguzosi ike n'ihe n'oge ya na Chelsea.
-esonụ nke puru iche ọpụpụ, Brendan Rodgers debere n'ọnọdụ ahụ site n'aka ndị njikwa Chelsea na-esote Avram Grant na Luiz Felipe Scolari. Mgbe o nwetasịrị oge iji tolite, Brendan Rodgers gawara Watford, Ọgụgụ na obodo kachasị dị elu nke Swansea dị ka onye nchịkwa.
Na Swansea obodo, onye nkuzi a na-amachaghị nke ọma malitere ịnata nkwado ọha na eze ka ọ na-eduzi klọb Welsh gaa na elu elu, mmezu nke nyere ya ọrụ 2012 Liverpool. Na Liverpool, Brendan Rodgers bịaruru nso na mmeri nke 2014 Premier League. N'agbanyeghị na ọ merighị, ọ nwetara bọl Champions League maka klọb (oge mbụ n'ime afọ ise).
Mgbe ọ gụsịrị Liverpool, a họpụtara Rodgers onye njikwa nke ndị mmeri Scottish Premiership Celtic. Kama nkwuputa, onye nkuzi Liverpool gara site n'ike rue ike. Ya dugara Celtic na oge ezi na ụlọ na-enweghị afọ na afọ mbụ ya, ma kechie ya niile, aghụghọ na oge abụọ ya mbụ.
Trent Alexander-Arnold Child Story Story na-emeghe akụkọ ihe omuma
Brendan Rodgers meriri okpukpu atọ maka Celtic- Nsọpụrụ ya kachasị elu dị ka njikwa.
Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ mmekọrịta
Brendan Rodgers zutere Sussan enyi ya nwanyị n'oge ọ na-enweghị ahụ, naanị mgbe oge mmerụ ahụ na mkpebi ịkwụsị ịgba bọl. Ha abụọ dere ihe dị ka afọ iri. Brendan gbara afọ 28 mgbe ọ lụrụ Sussan n’afọ 2001 Mgbe ọ ka bụ anụ arụ n'ụwa nke nchịkwa.
Nwunye Brendan Rodgers Sussan na-ebikọ ọnụ ọnụ tupu ha agbaa alụkwaghịm.
Susan Rodgers na di ya nọrọ n'oge ihe siri ike ma sie ike, site n'oge ọ bụ onye na-elekọta ụlọ ahịa na John Lewis, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ntorobịa Chelsea na nke kachasị mkpa, n'oge ọ ruru ogo ọrụ ọzụzụ ya na Liverpool. Ma ndị hụrụ n'anya gọziri agọzi na ụmụ abụọ bụ; Anton Rodgers (amụrụ; 26 Jenụwarị 1993) na Mischa Rodgers. N'okpuru bụ foto nke ụmụ Brendan Rodgers si Susan.
Zute ụmụ Brendan Rodgers- Anton na Mischa Rodgers.
Ị maara?… Nwa nwoke Brendan Rodgers, Anton Michael Rodgers gbasoro nzọụkwụ nna ya. Ndị Irish ọkachamara na-egwu egwuregwu na-egwu egwu dị ka midfielder malitere ọrụ ntorobịa ya na Chelsea FC agụmakwụkwọ site na 2006 ruo 2011 ebe nna ya kụziiri ya.
Ịgba Alụkwaghịm Akụkọ: N'oge ọrụ Rodgers na Liverpool, mmekọrịta dị n'etiti ya na Sussan malitere ịdị njọ, mmepe nke dugara n'ọgụ ikpe kpụ ọkụ n'ọnụ n'etiti ha abụọ. Mkpa ọ dị inye nkwado ego hụrụ Brendan Rodgers ka ọ na-etinye aka na usoro ịgba alụkwaghịm nke ọtụtụ nde na-achịkwa alaeze nke ezinụlọ ya nke nwere ụlọ 102 dị nde nde pound (Akụkọ DailyMail).
Rodgers gbara nwunye ya Susan alụkwaghịm kemgbe afọ 14 nke alụmdi na nwunye dị na 2015. O diri ma chere afọ abụọ tupu ya atụwa ma lụọ nwunye ọhụụ Ms Charlotte Searle. Ọ bụ agbamakwụkwọ akụkọ ifo nke mere na Loch Lomond na Scotland n'afọ 2017.
Brendan Rodgers lụrụ Charlotte na Loch Lomond golf club na Scottland.
Brendan Rodgers lụrụ Ms Charlotte Searle na 2017 mgbe ọnwa anọ ọ tụpụtara na New York. Tupu alụm di na nwunye, Ms Charlotte Searle bụ onye gbara alụkwaghịm nke zutere Rodgers mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka Onye nhazi Liverpool FC ọ ka bụkwa onye njikwa Liverpool. Amabeghị ma nzukọ ha gara aga ọ bụ nke kpatara nsogbu alụmdi na nwunye Brendan Rodgers nke dugara na ịgba alụkwaghịm ya na nwunye ya bụ Susan.
Charlotte Searle na-eme ka ntụkwasị obi dabere na ọnyà ọ bụla. Ọ bụ onye achọghị ọdịmma onwe ya, nke anaghị eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nke nwoke maka nwoke ọbụla ị pụtachara itinye ndụ ya na ọrụ dị anya ejidere.
Charlotte Searle nwere obi uto n'akụkụ ọ bụla nke di ya na Celtic.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ nke Onye
Tomata Brendan Rodgers Ndụ Nkeonwe pụọ na ihe ndị metụtara egwuregwu football ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụdị onye ọ bụ. Apụghị n'egwuregwu ahụ, a kọwara Rodgers dị ka onye nwere omume enyi, nsọpụrụ na mmesapụ aka nke hụrụ n'anya na-akpakọrịta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla - site na onye na-akwado ya na-eguzosi ike n'ihe na onye na-eri nri.
Mata Brendan Rodgers Ndụ nke Onwe gị pụọ na football.
Rodgers kwenyere na obi ụtọ kama ịchụso monies ọbụlagodi ị na-eme ya bụ ihe ọjọọ dị mkpa. Dabere na akụkọ, otu mgbe ọ jụrụ ịgbakụta ụzọ Lọ ọgbakọ China n'oge ọkọchị nke 2018 ịkọ BBC Scotland na "Na China, ọ bụ nnukwu ego, mana achọtala m obi ụtọ ebe a. "
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ Ezinụlọ
N'akụkụ a nke akwụkwọ anyị, anyị na-enyekwu ozi gbasara ndị ezinụlọ Brendan Rodgers malite na nne ya.
Banyere Brendan Rodgers 'Mama: Christiana nwere echiche dị iche iche nke Ndị Kraịst site na di ya nke ọ na-ekweghị ka ọ bụrụ mmetụta ọjọọ ọ bụla na Brendan na ụmụnne ya. Christina Rodgers bụ onye ji ịnụ ọkụ n’obi mee ngagharị iwe ruo mgbe ọ nwụrụ na 2010, afọ ọ tara ahụhụ site na nkụchi obi.
Banyere nna Brendan Rodgers: Malachy Rodgers, nna Brendan Rodgers bụ onye na-ese ihe, na-achọ mma ma bụrụkwa nke kachasị mkpa, onye Katọlik ji okpukpe ya kpọrọ ihe. Ọ dịrị ndụ ma taa ahụhụ site na Ọrịa Cancer na ngwụsị nke ndụ ya. Malachy enweghị ike ịnagide ya mgbe nwunye ya Christiana gafere n'afọ 2010. Ọ nwụrụ site na nsonaazụ ọrịa kansa ozugbo nwunye ya hapụrụ ụwa.
Brendan Rodgers Brothersmụnna: Na ezinụlọ Brendan Rodgers bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na dịka e kwuru na mbụ, ọ bụghị naanị ya na ndị ezinụlọ ya detụrụ ihe ịga nke ọma. Brendan na nwanne ya nwoke, Malachy Rodgers Jnr maara nke ọma dịka Rodgers na-aga nke ọma. Malachy Rodgers Jnr nke dị n'okpuru ebe a meere onwe ya aha site n'ịga n'ihu n'ịchụso ọrụ egwu na Nashville, Tennessee, United States.
Zute Brendan Rodgers Nwanna- Declan Rodgers.
Ị maara?… Malachy Rodgers Jnr nke dị na Nashville bụ onye a na-akpọ 'Mal'Starred na BBC talent show'Mba Jụụ'na obodo ya nke Northern Ireland tupu ọ gawa US (Tennessee) ebe ọ ghọrọ dike òtù nzuzo. N'akụkụ nke ọzọ nke ndụ, otu n'ime ụmụnne Brendan Rodgers aha ya bụ Declan Rodgers emeghị ka ọ baa ọgaranya ma nwee ọganihu. Ogbenye Declan Rodgers nke dị n'okpuru ebe a, ka ọ na-ama jijiji mgbe a chụsịrị ya maka nnukwu ụgwọ.
Brendan Rodgers 'gbajiri nwanne-Declan.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - si ebi ndụ
Brendan Rodgers bụ onye isi ọtụtụ nde mmadụ natara otu ngwugwu ụgwọ mara mma nke ihe dị ka £ 8million mgbe a chụrụ ya dị ka onye njikwa Liverpool na Ọktọba 2015. N'ịga na Celtic, ọ ghọkwara onye isi kachasị akwụ ụgwọ na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ, na-enweta ego 45,000 kwa izu.
N'agbanyeghị mmefu ndị a niile, Brendan na-ebi ndụ ndụ na mpụga. Nke a pụtara na Rodgers nwere a siri ike na-eche otú ọ ga-esi debe ego ya ahazi ya ma hazie ya. Ọ bụghị onye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, na-enweghị akaụntụ (n'oge edere) na naanị ilekwasị anya na ọrụ ya.
Mata Brendan Rodgers Ndụ Eziokwu.
Brendan Rodgers akụkọ nwata na gbakwunyere ihe banyere akụkọ ndụ ya - Eziokwu efu
Ihe isi ike na 4 Afọ nke ndụ ya: Afọ malite na 2010- 2014 e kwuru na ọ bụ afọ kachasị njọ Ndụ Brendan Rodgers. Afọ ndị ahụ jupụtara na nsogbu ezinụlọ nke gosipụtara nrụgide dị iche site na ọganiihu ọkachamara (dị ka a hụrụ n'oge ya na Liverpool). Na-amalite, obi mgbawa ezinụlọ malitere mgbe nne ya nwụsịrị, nna ya na-esochi ya ọnwa ole na ole ka e mesịrị. Ọdachi ahụ gara n'ihu mgbe nwunye Rodgers nwụsịrị (site na ịgba alụkwaghịm) tụfuru Njirimara (ịgba alụkwaghịm) n'ikpeazụ, tụfuru ọrụ ya dị ùgwù nke Liverpool.
Nwunye nwunye ọhụrụ ya lụrụ onwe ya: Nwunye ọhụrụ nke Brendan Rodgers Charlotte Searle lụrụbu Steven Hind, onye njikwa mmepe azụmaahịa. Abụọ ndị e sere n'okpuru ebe a lụrụ ọnwa 17, nwee nwa nwanyị tupu ha agbaa na 2013.
Di nwunye Brendan Rodgers nwụrụ mgbe nwunye ya hapụrụ ya.
Ị maara?… A hụrụ Steven Hind nwụrụ anwụ n'ime ụlọ ya na ụlọ oriri na ọ Londonụ Londonụ London Bosco ama ama. Onye ọrụ ibe ya hụrụ na ọ nwụọla mgbe ọ kwụsịrị ịga ọrụ na Ọktọba 2017. Di mbụ nke nwunye Brendan Rodgers lụrụ ndụ ya mgbe ọ dechara akwụkwọ na-ekwu 'ọ nweghị ike ịga n’ihu'.
E boro Nwa ya nwoke Mkpesa: Naanị mgbe Brendan Rodgers kewasịrị ya na nwunye ya, nsogbu ezinụlọ ya gara n'ihu. Oge a, nwa Rodgers (Anton) na mmadụ atọ ndị ọzọ banyere na nsogbu. Ha sere foto nke onwe ha mgbe ha na-awakpo nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma, ihe omume nke dugara na njide ha na ikpe n'ụlọ ikpe.
E jidere Brendan Rodgers Nwa mgbe ọ wakporo otu nwanyị.
E kwuru na mmejọ ahụ mere na Hury's Inn Hotel dị na Brighton na July 2011. N'ụzọ dị mwute, Brendan Rodgers na-elele ikpe nwa ya nwoke n'ụlọ ikpe site na ụlọ ngosi ọha. Emechara Anton bụrụ onye a tọhapụrụ mgbe a boro ya ebubo na ọ wakporo se * ual, nke nna ya kpọrọ 'Ihe ihere'
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Brendan Rodgers Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.